British Airways Bermuda sevhisi kubva kuLondon inoshandura kuenda kuHeathrow Terminal 5
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » British Airways Bermuda sevhisi kubva kuLondon inoshandura kuenda kuHeathrow Terminal 5
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bermuda Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Direct air service kuBermuda ichatanga kubva kuLondon Heathrow kutanga munaKurume 28, 2021 yakaziviswa pamwe nhasi ne Bermuda Ministry yekutakura uye British Airways (BA).
Iri sevhisi nyowani, rinoshanda kushoma kanokwana kana pavhiki uye zvakanyanya sezuva nezuva, ichavhura hwakawanda uye hwakasiyana hwakawanda hwekubatana kwendege kune avo vanoenda nekudzoka kuBermuda. Nepo kudiwa kwazvino kwendege kuBermuda kuchinyanya kubva kuUK, Heathrow ndege dzinogona kukurudzira zvakanyanya kudiwa kubva kune dzimwe nyika, kunyanya maguta eEurope.
"Uku kubudirira kwesiginecha kunopa hwaro hwekuwedzera kushanya kweBermuda kuEurope
Iye Hon. David Burt, Mutungamiriri weBermuda uye gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, vakati: "Ichi chiitiko chesaini chinopa hwaro hwekuwedzera kushanya kweBermuda kuEurope. Chikwata chose chakashanda pane izvi chakakodzera kuvongwa kwedu apo patakaisa danho remukana mutsva wekukura kwekushanya. "British Airways yanga iri shamwari inogara kwenguva refu uye ichikosheswa uye kubudikidza nehukama uhwu takabatana mukuchinja kunovandudzwa kunogamuchirwa nevose vanofamba kuenda nekudzoka kuBermuda." Dzvanya pano kuti uverenge zvakawanda
Zvitima Zvinosangana muTunisia Kubva paMakumi matatu kana Zvimwe Zvakakuvara
Hawaii mahotera anoona kudzikira kwemari uye kugara
Vagari vemuUS Vese Vakarairwa Kuti Vasiye Afghanistan ...